Sandals Resorts dia manaisotra ny ahiahy amin'ny drafitry ny dia eto amin'izao tontolo izao ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals Resorts dia manaisotra ny ahiahy amin'ny drafitry ny dia eto amin'izao tontolo izao ankehitriny
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovao Mafana Curacao • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ahh ... Sandal Resorts izany!
Ireo mpitsangatsangana dia mikoropaka kely, vonona ny hanao drafitra fialan-tsasatra, na eo aza ny zava-mitranga eo amin'izao tontolo izao ankehitriny. Soa ihany, Sandals Resorts dia manana fomba hanaovana ireo drafitra ireo amin'ny fahatokisana ary tsy manahy momba izay mety hitranga amin'ny ho avy.
Ireo vahiny ao amin'ny Sandals Resorts dia afaka mamela ny ahiahiny aorian'ny famandrihana ny fialan-tsasatra ary manonofy lehibe.
Ao amin'ny Sandals Resorts and Beaches, ny politikan'ny "Book with Confidence" dia manome fiadanan-tsaina, na inona na inona mitranga eto an-tany.
Na dia hatramin'ny andro fialana aza, dia manana fahatokisana sy fiarovana ny vahinin'izy ireo i Sandals.
Ao amin'ny Sandals, amporisihina ny vahiny mba hanonofy lehibe ary mikasa ny hanao vakansy ho avy miaraka am-pahatokisana tanteraka ary hampihena ny fanerena fanoloran-tena. Ny politikan'ny Sandals Book With Confidence dia ahafahan'ny vahiny mahazo famerenam-bola 100% raha nofoanana alohan'ny 31 andro na lava kokoa alohan'ny hiaingany.
Ary koa, mandritra ny fotoana voafetra, Vahin-kapa manana fahalalahana hanafoana ny diany hatramin'ny andro niaingany ary handray ny sazy fanafoanana ny tany naverina tamin'ny laoniny momba ny dia manokana momba ny dia.
Inona no tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana amin'ny fanafoanana ny fialan-tsasatra tsy manam-paharoa?
Ny tombontsoa ho an'ny fiarovana amin'ny fanafoanana ny ampahany amin'ny vakansy dia manome famerenam-bola 100% raha nofoanana farafaharatsiny 31 andro na mihoatra, na nofoanana hatramin'ny andro fiaingany, nahazo mari-pankasitrahana momba ny dia ho an'ny dia ho avy, ho an'ny famandrihana vaovao vita ankehitriny 31 Aogositra 2021. Ity tombontsoa ity dia omen'ny Unique Vacations fa tsy tombony fiantohana.
Ny vahiny izay mamandrika izao hatramin'ny 31 Aogositra 2021, dia mahazo tombony fanampiny amin'ny fahalalana fa afaka manafoana izy ireo amin'ny antony rehetra, ankoatra ny Daty Blackout araka ny voalaza etsy ambany. Tsy misy farafahakeliny halavany ilaina.
Karazan-tseranana sy efitrano fandraisam-bahiny
Tsotra ny milazalaza izany, satria manarona ny Sandal & Beach Resorts rehetra ity. Raha ny sokajy efitrano, ny ankamaroan'ireo dia rakotra ihany koa afa-tsy ny Bungalow ambonin'ny rano sy ny villa an-dranomasina any Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast, Sandals Grande St. Lucian.
6 Oktobra - 31 Aogositra 2021 *
6 Oktobra - 31 Desambra 2022 *
* Mihatra ny daty mainty -
Desambra 27, 2020 - Janoary 3, 2021
13 - 19 Febroary 2021
15 martsa - 11 aprily 2021
20 Novambra 2021 - 26 Novambra 2021
18 desambra 2021 - 31 desambra 2021
19 Febroary 2022 - 25 Febroary 2022
12 martsa 2022 - 26 martsa 2022
10 aprily 2022 - 24 aprily 2022
19 Novambra 2022 - 25 Novambra 2022
21 desambra 2022 - 31 desambra 2022
Makà antsipiriany misimisy kokoa eto.